Rotary Cup Filling Sealing Machine - ZONESUN နည်းပညာ LIMITED
Semi အလိုအလျောက် Capping စက်
အလိုအလျောက် capping စက်
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း & ဝန်ဆောင်မှု
နေအိမ် » ထုတ်ကုန် » ဖြည့်စက် » အလိုအလျောက်အဆာနှင့်ပိတ်ဆို့စက် » ZONESUN Automatic Jelly Yogurt Ice Cream Juice Sugar Honey Rotary Cup Discal Filling Capping Sealing Machine » Rotary Cup Filling Sealing Machine
ZONESUN ZS-FAL90 L ကို Configuration အလိုအလျောက်အရည်ဖြည့် Capping ပြီးတော့တံဆိပ်ကပ်စက်
ZONESUN ZS-FAL180 အလိုအလျောက် Desktop ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်း
ZONESUN ZS-180P အလိုအလျောက်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
အလိုအလျောက်အဆာနှင့် capping စက်
ZONESUN အလိုအလျောက်လှည့်ပတ်ပတ်လည်ပလတ်စတစ်ဖန်ပုလင်းစုဆောင်းစက်စက်အစားအစာထုပ်ပိုး Unscramble များအတွက် Turntable စက် Sorting Turntable စက်
ZONESUN ZS-LP600Z အလိုအလျောက်လှည့်ပတ်လည်ပတ်နိုင်သောပလတ်စတစ်ဖန်ပုလင်းဖလားကိုဖယ်ရှား။ မရသောဖန်ဘူး
ZONESUN အလိုအလျောက်လှည့်ပတ်လည်ပတ်နိုင်သောပလတ်စတစ်ဖန်ပုလင်း unscrambler စားနပ်ရိက္ခာထုပ်ပိုး Sorting Turntable Feeding Table စီစဉ်ပေးစက်
သယ်ဆောင်စျေးစက်စက်ခါးပတ်များအဘို့အ ZONESUN ZS-CB150 အလိုအလျောက်အသေးစားချည်နှောင်
N95 မျက်နှာဖုံးအတွက် ZONESUN နှာခေါင်းတံတားဂဟေဆော်သည့်စက်
ZONESUN ZS-801 စက်ဝိုင်းပုလင်းတံဆိပ်ကပ်စက်
ZONESUN ZS-TB803 အလိုအလျောက်တံဆိပ်ကပ်စက်
ZONESUN Pneumatic Tabletop အလိုအလျောက်ဖန်ခွက်ပုလင်းအဖုံးစာနယ်ဇင်းစက် Jar ဝီစကီပလပ်စတစ်ပုလင်းထုပ်စက်
ZONESUN အလိုအလျောက်သံလိုက် Pump အရည်ဖြည့်စက်
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအတွက် ZONESUN အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်ဖြည့် Capping တံဆိပ်ကပ်စက်
ထုပ်ပိုးအိတ်များအတွက် ZONESUN ZS-TB832 အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ပြားချပ်ချပ်မျက်နှာပြင်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်
ZONESUN ZS-TB823 အပြည့်အဝပတ် ၀ န်းကျင်ပုလင်းတံဆိပ်ကပ်စက်
Desktop Peristaltic pump စက်ဖြည့်သည့်စက်
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်ထုပ်ပိုးစက်များထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသည်, ထိုကဲ့သို့သောဖြည့်စက်အဖြစ်, capping စက်, တံဆိပ်ကပ်စက်နှင့်လေဟာနယ်ထုပ်ပိုးစက်စသည်တို့. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံထက်ပိုပါတယ် 15 နှစ်ပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်ခဲ့သောအတွေ့အကြုံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အများစုသည် CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်.
Whatsapp / Wechat / ဖုန်း:86 +86)13927284269(အာဘီ)
1st Shuikou တောင် 2nd လမ်း။, Jinsha မြို့, Nanhai distric, ဖoshanမြို့, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်